$ 59.99 inokutengera iyo microsoft lumia 640 ye pa & t & apos; s enda foni, kubva pane yakanak kutenga
Kuru Nhau & Ongororo $ 59.99 inokutengera iyo Microsoft Lumia 640 yeAT & T & apos; s Go Runhare, kubva kuGood Buy
$ 59.99 inokutengera iyo Microsoft Lumia 640 yeAT & T & apos; s Go Runhare, kubva kuGood Buy
Kudzoka muna Chivabvu, kana uchikurukura kuti ndeipi Lumia nhare dzaizotora Windows 10 Nhare kutanga , Microsoft & apos; s Scandinavia General Manager Ossi Korpela akataura nezveMicrosoft Lumia 640 senhare inodhura. Isu & apos; tine chokwadi chekuti hapana mumwe wevaverengi vedu angareva iyo Lumia 640 seyemureza, asi inokwanisika. Uye nekuda kwechibvumirano chiri kupihwa neBest Buy, inotonyanya kudhura.
Kutanga tanga zvinhu. Iyo Lumia 640 inoratidzira 5-inch skrini ine 720 x 1280 resolution. Izvo zvinoshanda kune pixel density ye 294ppi. Snapdragon 400 SoC iri pasi pehood, yakatakura 1.2GHz quad-core CPU uye Adreno 306 GPU. 1GB ye RAM iri mukati, pamwe ne8GB yekumukati memory. Mune inoitika nyaya yekuti iwe unoda imwe yekuchengetedza, iyo 128GB inokwanisa microSD slot inowanikwa. Iyo kamera kumashure inorema mukati pa8MP, iine .9MP snapper pamberi inowanikwa ye selfies. Bhatiri re2500mAh rinochengeta mwenje urambe uripo, uye izvozvi Windows Phone 8.1 yakagara yaiswa.
Iwe unogona ikozvino kutenga iyo Lumia 640 ne $ 59.99 kubva kune guru bhokisi mutengesi Best Buy. Isu & apos; hatizive kuti Yakareba Buy ichaita sei kuti chibvumirano ichi chiwanikwe, asi isu tinoziva kuti iwe unogona kutora iyo unit yemutengo wekutengesa izvozvi. Ramba uchifunga kuti uyu hausi-chibvumirano mutengo wefoni, unoenderana neAT & T & apos; s Go Runhare rwakabhadharwa-isina waya sevhisi.
Best Buy inopa iyo Microsoft Lumia 640 iri kutengeswa ne $ 59.99
mabviro: BestBuy kuburikidza WMPoweruser
pa & t 5g mabhendi
mutsauko pakati pekuomarara nekutanga
chinyorwa 20 Ultra sd kadhi
Google Pixel 2, Pixel 2 XL mutengo, zuva rekuburitsa uye kuwanikwa kweanotakura
Yakanakisa Samsung Galaxy S21 + kesi
Android 5.1.1 inomhanya paGreen Note 4 mune mabhenji; inogona kuve 64-bit yakagadziridzwa
Apple inoratidza kugadziriswazve kwefekitori kweApple Watch uye pairi iPhone; ndinofanira kuita izvi?
Jabra Elite 65t & Jabra Elite Inoshanda 65t isina waya nharembozha maoko-on
HTC One M9 inotanga kuwana Android 7.0 Nougat yekuvandudza paAT&T
Heano manomwe iPhone 7 Plus bhatiri makesi ekukubatsira iwe kuenda iyo yekuwedzera mamaira ... kana mashanu.
Deal: Yakavhurwa Rukudzo 6X inodonhedza ku $ 150 paAmazon uye Best Buy, iwo wakaderera mutengo kusvika zvino